Ubuhlungu buya enhliziywenikumzali enhliziywenikumzali owashonelwa yingane yakhe | Bayede News
Home/ Izindaba/Ubuhlungu buya enhliziywenikumzali enhliziywenikumzali owashonelwa yingane yakhe
Ubuhlungu buya enhliziywenikumzali enhliziywenikumzali owashonelwa yingane yakhe
‘NGIYAZI ngeke ngimvuse umfana wami kepha njengomzali nginelungelo lokwazi ukuthi kwenzakalani. Unina nomndeni wonke wakwaGwala unelungelo lokwazi ukuthi wahamba kanjani”. Lawa ngamazwi alusizi ashiwo nguMnu uFana Edward Gwala ngesikhathi ekhuluma noZul’azayithole abebevakashele kwakhe belusa udaba lokwedlula emhlabeni kwendodana yakhe uZolani Gwala eminyakeni emine eyedlule.
UGwala ongaboni wazifikela mathupha kuBAYEDE ezocela usizo. “Ngiyacela ningibambise, ningifunise iqiniso ngalolu daba. Sengihambe yonke indawo. Njengomzali kubuhlungu kuyaqaqamba ukuthi angikwazi ukuchaza kwabanye bomndeni ukuthi kwenzakalani ngoba nami ngingenalo ulwazi oluphelele. Ayingisize iBAYEDE, angiboni kepha uma ngifundelwa leli phephandaba ngiyazizwa izigi zalo. Ngisizeni,” kusho uGwala owayebonakala ukuthi ulimele emphefumulweni.
Nembala Ozul’azayithole balusukumela lolu daba ukuthola ukuthi kwenzakalani. Abaphathi bephephandaba ngaleso sikhathi bazibophezela ekutheni bazohamba noGwala kuze kube sekugcineni. Kuleli sonto iBAYEDE ihambele emzini ukuyothola ukuthi udaba selukuphi. Ekufikeni kwethimba nelifice amalungu omndeni amancane namadala kubalwa nomama womfana uNkk uGwala uMaPhewa, kubonakele ukuthi kukhona okuwushintsho endaweni. Egcekeni lakwaGwala zikhona izakhiwo esezishintshile ngisho nendlu lapho umfana elondolozwe khona isihlabathi asiseyona ingqumbi okukhomba khona ukuthi iminyaka isihambile. Okunye okuguqukile wukuthi uThishanhloko wesikole lapho umfana ayefunda khona akasekho sekukhona omunye. Uthisha osolwayo ngokufa komfana akasafundisi kulesi sikole kanjalo nomhloli udaba olwabe lubekwe kuye akasekho sekuphethe omunye. Akugcini lapho uMphathiswa uNkk uPeggy Nkonyeni kanye neNhloko yoMnyango Wezemfundo, uDkt uNkosinathi Sishi ababekhona ngesikhathi sesehlakalo nabo kabasekho kulezi zikhundla.
Kuzo zonke lezi zinguquko kukodwa okungakanyakazi, yilokho okungumongo nokwabe kukhalisa lo mndeni, akuguqukile. Nanamuhla udaba lwendodana yabo alukafiki esiphethweni.
NgoLwesithathu iBAYEDE ihambe noGwala ukuya esikoleni somfana iMnamatha Primary esikhona endaweni. Umsindo wezingane ezilingana nomufi kanjalo nesikole kubukeka kwenze okuthile kuGwala. Lapha esikoleni samukelwe nguThishanhloko omusha uNks uMhlongo nowamukelane kahle noGwala. Ekukhulumeni kwabo kuvelile ukuthi kabaqali ukukhuluma ngalolu daba nokuthi uThishanhloko ulwazi kahle.
“Ngiyalwazi udaba futhi sengike ngakhuluma nobaba uGwala. Njengoba ubaba uGwala esho kwakumele ngibhale incwadi ngiyiyise kwabangaphezu kwami kepha ngelulekwa ukuthi udaba lomfana selungaphezu kwesikole. Ngama lapho njengoba namanje ngiseluleka ukuthi nikhulume nabangaphezu kwami mayelana nokusha ngalolu daba,” kusho uNks uMhlongo.
Kuthe kungaqedwa ukukhulunywa, uGwala wabe esecela ukubanjwa ngengalo ayiswe egunjini lapho umfana ayefunda khona. Yize lokho kwenzekile kube nembibizane ngoba uThishanhloko uthole ukuthi njengoba izingane bezisanda kuphuma nje ukhiye wokuvula uhambe nenye yezingane efika kuqala ekuseni ngalokho uGwala akakwazanga ukungena egunjini anelise lokho obekuyisifiso sakhe.
“Eyi umfana wami wayefunda lapha. Okungiphatha kabi wukuthi kwabanye impilo iyaqhubeka kimi imile. Ngithe uma ngibuza umseshi ophethe udaba wamane wangidida kakhulu kunasekuqaleni njengoba engazise ukuthi kukhona okungahambanga kahle ezicutshini zomfana ezayiswa ePitoli”, kusho uGwala egebisa ikhanda, wahlala phansi wayibamba wayiqinisa induku yakhe emlekelela ukuthi angakhubeki nxa ehamba.
Umseshi abekhuluma ngaye uGwala nguGayi. Leli phephandaba lizamile amahlandla amahlanu ukumthinta lo mseshi ngeshwa ucingo lwakhe belungangeni. UGayi uzinze esiteshini samaphoyisa saseNtshangwe kanti leli phephandaba lake lakhuluma naye ngokwedlule. Ngaleso sikhathi kwake kwaba nomzukuzuku lapho amaphoyisa etshengisa ukungazi ngokuqhubekayo ecaleni. Ngaleso sikhathi mabili amaphoyisa ayekhuluma neBAYEDE kwakunguMphathi wesiteshi uKholoneli uWilliam Ntanzi. UFakazi (abakwaNtanzi) ngaleso sikhathi wakhombisa ukulukhumbula udaba lukaGwala kodwa wathi akasenayo imininingwane ngenqubekela phambili yophenyo. Okwathi emuva kokunikwa inombolo yecala yizintatheli wachofoza ikhompyutha neyakuqinisekisa ukuthi ngabe kwagcina kwenzekeni ngalo nokuthe eseziqinisekisile ukuthi lisekhona kanye nomphenyi walo wase ememeza, uWarrant Officer uGayi ukuba azochaza.
Umfo kaGayi naye ufike wazihlangula ethi ngokwazi kwakhe idokodo laligcine liphenywa nguzakwabo onguWarrant Officer uNzama. Kodwa uKholoneli uNtanzi wakugcizelela ukuthi ngokombhalo kukhompyutha yakhe kuvela ukuthi nguye uWarrant Officer uGayi ongumphenyi walo.
“Cha Mphathi sengiyakhumbula ukuthi idokodo ledluliselwa kimi ngemuva kokuthi uzakwethu uWarrant Officer uNzama eseshintshelwe kwesinye isiteshi. Kodwa ngokwazi kwami uzakwethu uNzama ubelulandela udaba futhi exhumana nobaba uGwala,” kusho uWarrant Officer uGayi.
UWarrant Officer uGayi wabindwa yisidwa ngesikhathi ebuzwa ukuthi njengoba naye evuma ukuthi idokodo lagcina linikezwe yena yikuphi asekwenzile ngalo nokuthi useke waxhumana yini nomzali kamufi njengoba ekhala ngokuthi amaphoyisa awaxhumani naye ngaphandle kokuthi uWarrant Officer uNzama wagcina emxoshise okwenja ethi icala selavalwa nokuthi akenze akuthandayo ngalo.
“Noma ngingasakhumbuli kahle bengicela ukuyolibheka idokodo ngiyaqinisekisa ukuthi likhona ehhovisi,” kusho uWarrant Officer uGayi.
Kuthe uma esebuye nalo wabikela uColonel uNtanzi ukuthi ngokwedokodo icala alivaliwe lisaqhubeka.
“Kodwa okushodayo ngaphambi kokuba kuphothulwe uphenyo ngumphumela wocwaningo olubizwa ngehistology, lokhu ukucutshungulwa kwezicutshana zomzimba. Phela udokotela owahlola isidumbu wathi udaba ulwedlulisela kwabehistology ngenxa yokuthi yena akukho angakuqinisekisa ukuthi ingane yashona ngenxa yokushaywa. Ngenxa yalokho nathi-ke sasingeke sigxume siyobopha uthisha ngoba lokho kwakungasifaka enkingeni. Yingakho kusalindwe lo mphumela wocwaningo ngaphambi kokuba kube khona esikwenzayo ngophenyo,” kuqhuba uWarrant Officer uGayi.
Kwathi uma ebuzwa ukuthi ngabe lolu lwazi alushoyo manje ukuthi ngabe sebamazisa yini nobaba wengane nokuthi ngabe futhi bamnikeza yini nomphumela wokuhlolwa kwesidumbu wudokotela uDiagasen Pillay njengoba ubaba wengane yena ekhala ngokuthi akakaze anikezwe wona. “Ngicabanga ukuthi umuntu ongachaza kahle kulowo mbuzo nguzakwethu, uWarrant Officer uNzama kodwa inkinga ukuthi akekho njengoba esaphumile okwamanje,” kuqhuba uGayi.
Kwake kwanokukhuluma okwakuvela kuGwala ngempatho athi ayibanga yinhle ngaphansi kukaNzama. Nokho uNzama wazichitha izinsolo ezenziwe nguGwala okubalwa nokuthi wamxosha ngesikhathi ezofuna ukwazi ngophenyo lokufa kwendodana yakhe.
“Ngamchazela kahle ubaba uGwala ukuthi sisalinde umphumela wokuhlolwa kwesidumbu obizwa ngehistology ngaphambi kokuba ngihambise idokodo kuMshushisi okunguyena ozonquma ngokuzokwenziwa ngedokodo. Udokotela wasesibhedlela iChief Albert Luthuli wathi kuzomele kulindwe iminyaka eyisi-8 ngaphambi kokubuya komphumela wocwaningo ngembangela yokufa kwengane kaGwala. Nathi-ke akukho esingakwenza ngaphandle kokulinda,” kusho uNzama.
UKholoneli uNtanzi wabe eseyalela uWarrant Officer uGayi ukuthi njengoba idokodo selinikezwe yena kuzomele ayobonana nomzali wengane ukuze amchazele kahle ngakho konke okuqhubekayo ngophenyo lwamaphoyisa okubalwa nokuthi icala alivaliwe lisaphenywa.
NgoLwesithathu uGwala ukuqinisekisile ukuthi wagcina ukukhuluma noGayi ngoMasingana nakhona ngoba esehlwaya ukuthi kubambephi. “Ngathi uma ngimthinta wathi ubeyile ePitoli ngoZibandlela, nakhona uthi empeleni wabe engahambele lolu daba kepha nalo lwabe nje lusohlwini. Okufike kwangishaqisa yikho lokhu kokuthi athi izicubu zikaZolani owafihlwa eminyakeni emine eyedlule zisekhona ePitoli. Angagcini lapho abuye athi sekukhona inkinga yokuthi inombolo (serial number) ayihambisani nalezo zicubu okuthiwa zikhona. Impela angazi ngithini manje. Khona kuyikho yini ukuthi njalo ngithole ngalolu daba uma kubuza mina, hhawu kubuhlungu ukungaboni ngoba nalaba bantu engikhuluma nabo angibaboni, kodwa yize kunjalo inhliziyo iyefana neyababonayo ibuhlungu iyaqaqamba,” kuphetha uGwala.
Kuwe inkanyezi kwasala ukubenyezelela isizwe